Ciidanka Xoogga dalka oo howlgallo qorsheysan ku dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Ciidanka Xoogga dalka oo howlgallo qorsheysan ku dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab
Ciidanka Xoogga dalka oo howlgallo qorsheysan ku dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Ciidanka Xoogga dalka ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellada hoose, waxaana lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Howlgalkaan ayaa waxaa uu ka dhacay deegaannada kala ah, Walla-galeen, Galka Saalimow, Dahaad, Ceel-maracade iyo Garas-gawaan oo ka tirsan gobolka Shabeellada hoose.
Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Jen. Maxamed Tahliil Biixi oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in howlgalka ku dileen 11 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab uuna ka mid yahay horjoogihii watay maleeshiyaadka.
Sidoo kale, taliyaha ayaa sheegay inay burburiyeen goobo Al-Shabaab dadka shacabka ah ugu qaadanjireen lacagaha baadda ah.
Muddooyinkii dambe ciidanka xoogga dalka ayaa waday howlgallo qorshaysan oo lagu cirib-tirayo maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana fulinayay ciidanka sida gaarka ah u tababbaran ee Danab.
Xubno ka tirsan Al-Shabaab